TAG ထားတယ်ဗျို့: March 2009
ငယ်ငယ်က ဝါသနာ... အင်း.... ဘာများပါလိမ့်...!!
တိမ်တွေအုံ့ပြီး ညို့လာရင် ရင်မှာ တမျိုးကြီးပဲ.. အဲ့ဒါ ဟိုးငယ်ငယ် ကလေးလေး ဘဝကတည်းကပါ... စာမဖတ်တတ်ခင် အရွယ်တုန်းကတော့ စားပွဲတွေ ခုံတွေအောက်ကိုတိုးဝင်.. ဒါမှမဟုတ် အခန်းထောင့်လေး တနေရာရာမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေတတ်တယ် လို့ မေမေက ပြောဖူးပါတယ်... စာလေးတစ်လုံး နှစ်လုံး ဖတ်တတ်ချိန်ရောက်တော့ တွေ့ရာစာအုပ်လေး တစ်အုပ်ကို ဆွဲယူသွားပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ကွေးကွေးလေး ငြိမ်နေတတ်ပြန်ရော.. လက်ထဲက စာအုပ်ကိုလည်း မလှန်ဘဲ မှန်ပြတင်း အပြင်က တိမ်တွေကို ငေးငေးနေတတ်တဲ့ ဝါသနာလေး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်...။
ကလေးမက လူကြီးလည်းမကျ အရွယ်လေးရောက်လာပြန်ပြီ..!!
ဝါသနာအရ ပြောရမယ် ဆိုရင်လည်း ကလေးလေး တုန်းကနဲ့ ထူးမခြားနားပါပဲ... သိပ်မလည် တတ်ခဲ့ဖူးပါဘူး.. သူငယ်ချင်းတွေက လာခေါ်တိုင်းလည်း သူတို့တွေ စိတ်ညစ် လက်လျှော့ပြီး ပြန်သွားရတတ်တာက ခပ်များများရယ်ပါ။ သီချင်းတွေ နားထောင်တတ်လာတယ် ဂစ်တာလေးစ တီးတတ်လာခဲ့ပြီ... နောက် ကဗျာစာအုပ်တွေ ဝတ္တုတွေ ရည်းစားစာတွေ..(ဟီးး) ဖတ်တတ်လာတာပေါ့... ပြီးတော့ ရာသီဥတုတွေကို ရင်မှာ ပိုခံစားတတ်လာတယ်..။ မိုးရွာတာကို ကျွန်မ မုန်းတယ်.. မိုးတွေမရွာခင် ပြိုအိဆင်းလာတဲ့ တိမ်တိုက်တွေကို ငေးကြည့်ရင်း ဂစ်တာလေး တီးနေရတဲ့ ဝါသနာကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင် အရမ်းသဘောကျမိတာပါ...။
တစ်ယောက်တည်း သွားရလာရတာမျိုး ကြိုက်တဲ့ ဝါသနာ ကျွန်မမှာရှိတယ်.. တော်ရုံတန်ရုံ အဖော်တွေနဲ့ မသွားတတ် မနေတတ်ပါဘူး.. ရှော့ပင်းသွားရင်လည်း တစ်ကိုယ်တည်း သွားချင်တာ.. ဘေးမှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက် ပါလို့ သူ့ကို အားနာပေးရတာမျိုး သဘောမကျပါဘူး..။ ငေးချင်ရာကို ငေးမယ်.. လိုချင်ရာကို ဝယ်မယ်.. တစ်နေရာရာမှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ချင်ထိုင်နေမယ်.. အချိန်တွေကို မေ့ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် နာရီကို ခဏခဏ ငုံ့ကြည့်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေတတ်တယ်..။ ဆူဆူညံညံ နေရာတွေမှာ သွားထိုင်ဖြစ်ရင်လည်း တစ်ယောက်တည်းပါပဲ.. ခပ်မိုက်မိုက်ပေါ့ ဘာဖြစ်လဲနော့...!! အသေချာဆုံး ဝါသနာကတော့ တစ်ယောက်တည်း ထင်ရာကျဲခြင်းပါပဲ...။
နောက်တစ်ခုကတော့... အင်မတန် အအိပ်မက်ပါတယ်..။ အပျင်းထူ အအိပ်ပုတ်တဲ့ ဝါသနာ အကြီးကြီး ရှိပါတယ်... ကျွန်မ အအိပ်မက်ရခြင်းမှာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိနေတယ်..။ ကျွန်မလား...!! ဟုတ်..!! စိတ်အရမ်းညစ်လာရင် အိပ်ပါတယ်.. တစ်စုံတစ်ရာကို သေမလောက် လွမ်းဆွတ် တမ်းတလာရင်လည်း အိပ်ပါတယ်.. အတိတ်ဆိုတာတွေ ခေါင်းထဲရောက်လာရင်းလည်း အိပ်လိုက်ပါတယ်.. မနက်ဖြန်ဆိုတာကို ကြိုမတွေးချင်ရင်လည်း အိပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..။ ခံယူချက်ကတော့ အိပ်ပျော်သွားရင် အရာအားလုံးကို တစ်ခဏတော့ မေ့သွားနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်.. မထင်မှတ်ပဲနဲ့ မအိပ်ခင် အတွေးတွေကိုစွဲလို့ အိပ်မက် မက်တတ်တာကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့လေ.. အိပ်မက်တွေ နှိပ်စက်ရင်တော့ သိပ်သိပ်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်...။
လောလောဆယ် ဝါသနာကို ထပ်ပြောပြဦးမယ်... အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဘလော့ဂ် ကိုက်နေပါတယ်။ မယ်မယ်ရရ မဟုတ်တဲ့ စာတိုပေစ ကဗျာမကျ ဘာမကျ အထာမကျတွေ လျှောက်ရေးနေမိတာပါပဲ... ရင်ဘတ်ထဲက အမှန်အကန်တွေ ဘလော့ဂ်လေးပေါ်မှာ အန်တယ်.. တစ်ခါတလေတော့ ဘလော့ဂ်လေးဟာ ကျွန်မအတွက် အန်ဖတ်ပုံးလေး... အိပ်မရတဲ့ညတွေမှာ စာမူး မူးပြီး ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် အန်ချင်လာတိုင်းလည်း ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာလေးက အဖုံးလေးကို ကြည်ဖြူစွာ အဆင်သင့် ဖွင့်ပေးထားတတ်သေးတာ..။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နေ့စဉ်ညတိုင်း အန်ဖတ်ဆို့မတတ် အန်အန် နေတယ် ဆိုပါတော့..။ တစ်ခါတလေတော့ သူက သိပ်သဘောထားကြီးပြီး သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရင့်ကျက်နေတဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်လိုပဲ.. ကျွန်မအနွံတာတွေကို ခံပေးနေတတ်တယ်.. ဘလော့ဂ်လေးအပေါ်မှာ အတ္တကြီးကြီးနဲ့ ဆိုးချင်တဲ့ ဝါသနာကြီး တွယ်ကပ်နေတာ တော်တော်လေး ဆိုးပါတယ်.. ။
ကျွန်မ တကယ် မကောင်းပါဘူး..။ အခု.. လောလောဆယ်တော့ သူ့အပေါ် အနိုင်ယူပြီး ဆိုးတတ်တဲ့ ဝါသနာကြီးကို ခဏရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် အနားလေး ပေးလိုက်ပါဦးမယ်...။
ကယ်.... ကျွန်မ တစ်ရေးတမော အိပ်လိုက်ပါဦးမယ်.... :P
ပေစောင်းစောင်း ရိုက်ချက်ဆရာ မယ်မျိုးမျိုး (မောင်မျိုး) က Tag ထားတဲ့ ဝါသနာလေးများ ဆိုတဲ့ Tag Post လေးပါ..။ ကိုမျိုးရေ... ရေးလိုက်ပြီ ကျေနပ်တော့နော့... ဟဲ.. ဟဲ..!! ခုတော့ ခင်လေး အိပ်လိုက်ဦးမယ်.. နေ့သမား မောင်နှမ ဆရာသမားများ ဂွတ်နေ့(စ်).. ညသမား မောင်နှမ ဆရာသမားများလည်း ဂွတ်ည(စ်)လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်... အားလုံးဘဲ တာ့(စ်) တာ ပါနော်....!!
အားလုံးနဲ့ တိုက်ကြည့်ပြီး အဖြေတစ်ခုခု ထုတ်ကြည့်ချင်ခဲ့တယ်။
လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယေက်စိတ်ဓါတ်အခြေခံ သဘာဝချင်းမှ မတူကြတာ။
ပြီးတော့ ရလာတဲ့ ဘဝအခြေအနေ ချင်းကလည်း မတူကြတော့ အချစ်ဆိုတာလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးပြော ဖို့တော့ခက်မယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ အချစ် ဆိုတာကတော့
- သူ စိတ်ညစ်လာတဲ့ အခါတိုင်း အားပေးနိုင်ခွင့် ရချင်တယ်။
- သူ့ ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှ တစ်ဝက်လောက်ကိုတော့ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ချင်တယ်။
- သူ့ ရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံး အားအကိုး ရဆုံး သူဟာလည်း ကျွန်တော်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။
- သူ့ကို နားလည်ပေးနိုင်ဆုံးသူ ဖြစ်ချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် အခြေနေမှာ သူနဲ့အရမ်းဝေးနေပြီး
ချစ်ကြောင်း ချစ်သူ သိစေချင်ငြား
ညီမလေး ပန်းခင်း ရေးစေချင်တဲ့ tag ပို့စ်လေးပါ ..။
အချစ်ဆိုတာ ဖြေရှာညှိမရတဲ့ ဝေဒနာအသိတစ်ခုကို ဖွေရှာမိနေတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခု ..
အချစ်ဆိုတာ ရှုံးနိမ့်ခြင်း အောင်နိုင်ခြင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရသလို တစ်ခါတစ်ရံ မျိုသိပ်ထားရာမှ ပုန်းလျှက်ထွက်လာတဲ့ စိတ်စေညွှန်တဲ့အရာ ..
အချစ်ဆိုတာ မေတ္တာစစ်ရင် ရှုံးလျှက်နေရင်တောင် အမုန်းမဖက်တဲ့ သစ္စာတရား ..
အချစ်ဆိုတာ ရှိုက်ထိလွယ်လို့ လှိုက်ဖိုမိစေတဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ..
အချစ်ဆိုတာ လေယူရာတိမ်း ယိမ်းနွဲ့တတ်ပေမယ့် ယှက်ဖြာနေရင် ရုန်းမထွက်လို့ ယိမ်းမသွားစေတဲ့ စစ်မှန်ခြင်းသဘော ..
အချစ်ဆိုတာ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်နှင့် ထိတွေ့ပြောဆိုမှုအပေါ် သာယာစေတတ်တဲ့ တဏှာပေမ ..
အချစ်ဆိုတာ ကြောက်စိတ်ကို ပယ်ပျက်စေသလို ရဲရင့်မှုကို ဂုဏ်ဆောင်စေတဲ့ သတ္တိ ..
အချစ်ဆိုတာ သတိရတက်မက်မှုကြောင့် ရယူလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် မဖြစ်နိုင်မှန်း သိခြင်းစလို့ စွန့်လွှတ်ရခြင်းအဖြစ်ကို ပေးဆပ်ရတဲ့ ထွေပြားစေတဲ့အရာ ..
အချစ်ဆိုတာ ပြောရခက်ပေမယ့် ခံစားသိတဲ့ အာရုံတစ်ပါး ..
အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကို လိုလားမိတဲ့ လောဘ ..
အချစ်ဆိုတာ ရေပျော်ငါးလို လူးလွန့်စေတဲ့ စိတ်ကြွမှု ..
အချစ်ဆိုတာ အတောင်အလက်နဲ့ ပျံသန်းနေရင်း အချိန်တန်ရင် ပျောက်ရှသွားမယ့် မမြဲခြင်းတရား (ခန္ဓာငြိမ်းသည့်အခါ) ..
အချစ်ဆိုတာ ကြင်နာယုယ အစဉ်သာနုပြစေသလို တစ်ခါတစ်ရံ အခန့်မသင့်လို့ လမ်းပျောက်ရင် ဆောင့်တတ်စေတတ်တဲ့ ဒေါသ ..
အချစ်ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲကို လူပုံအလယ် နှစ်ယောက်ကမ္ဘာငယ်မှာ အရမ်းချစ်ပြတာကို လိုလားမိတဲ့ ဆန္ဒ ..
အချစ်ဆိုတာ ငြီးငွေ့လွယ်ပြီး ထိတွေ့ကြွယ်သလို တိုးပွားချစ်စေတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ..
အချစ်ဆိုတာ လူ့ဘ၀ဖြစ်စဉ်မှာ ထူးကဲစွာ တွေ့ဆုံကြုံကွဲရတဲ့ ဖြစ်ရပ် ..
အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံ နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပိုမြန်စေတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှု ..
အချစ်ဆိုတာ နီးခြင်း ဝေးခြင်းထက် တန်ဘိုးထား မြတ်နိုးမှုအပေါ် မူတည်၍ ခိုင်မြဲစေတတ်တဲ့ ဆုံဆည်းခြင်း ..
အချစ်ဆိုတာ လူတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပညတ်ချက်တစ်ခု ..
အချစ်ဆိုတာ ယုံကြည်မှုရှိရင် ပုံအပ်နှင်းတတ်တဲ့ မိုက်မဲမှု ..
အချစ်ဆိုတာ မချစ်တတ်သူ ၊ တန်ဘိုးမထားသူတွေအတွက် ဖယောင်းမီးလို ထွန်းညှိလင်းနေပေမယ့် အကာအကွယ်ပေးမထားမိရင် လေအတိုက်မှာ ဟုတ်ခနဲနဲ့ ဖျတ်ခနဲ ပျောက်ပျက်သွားတတ်တဲ့ အလင်းရောင် ..
အချစ်ဆိုတာ အချစ်ငတ်သူတွေအဖို့ ဟိုယောင်ဒီယောင်နဲ့ အချစ်လိုချင်ပြီး မရရှိတဲ့ အထီးကျန်ခြင်းတစ်မျိုး ..
အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေတုန်းမှာ ကြည်နူးသလို အသည်းကွဲတဲ့အခါ ၀မ်းနည်းခြင်းစိတ်ကို အစပြုလို့ နာကြဉ်စေတတ်သလို ရှောင်ဖယ်လို့ မျိုသိပ်ကြိတ်မှိတ်တတ်ပြီး ပွင့်အန်ထွက်စေတဲ့ အပြုအမူနှင့်အတူ ရင်ဖွင့်ဖေါ် တိုင်ပင်ဖေါ် ရှိစေတတ်တဲ့ ဒွိဟများစေတဲ့ စိတ် ..
အချစ်ဆိုတာ မုန်းတီးခြင်းနှင့် နောင်တရစေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ မာန် ..
အချစ်ဆိုတာ အညှိုးအတေးတွေနဲ့ လုပ်ကြံတတ်သလို တစ်ကယ်မချစ် အစစ်မပါတဲ့ ဟန်ဆောင်မှုတစ်မျိုး ..(အချစ်စစ်မဟုတ်ရင်)
အချစ်ဆိုတာ မမေးပဲ မပြောပဲသိတဲ့ စကားဝှက်ရဲ့အဖြေ ..
အချစ်ဆိုတာ ကိုင်တွယ်မြင်တွေ့ ထိလျှင်မရပေမယ့် အိမ်ထောင်မှု တည်ဆောက်ချင်အောင် တွန်းအားပေးစေတဲ့ အာသီသ ..
အချစ်ဆိုတာ စိတ်အသိမှ ရင်ဘတ်အထိ မိပြီးတော့ ပါးစပ်ခံတွင်းမှ ပွင့်အန်ထွက်လာတဲ့ လေအသုံးတော်ခံစကား ..
အချစ်ဆိုတာ နောက်ဆုံးမှာ သဘာဝလောကကြီးနှင့်ယှဉ်ရင် မဖြစ်စလောက်ပေမယ့် လှုပ်ရှားရှင်သန်နေသူတွေအဖို့တော့ အချစ်ကြောင့် အရာရာကိုဖြစ်ပေါ်စေသလို ပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ သီအိုရီမရှိတဲ့ နိယာမတစ်ခု ..
အချစ်ဆိုတာ သေချာတစ်ခုကတော့ အချစ်ရှုံးလို့ လူဖြစ်ရှုံးရတဲ့ လူတွေရှိသလို အချစ်ခံလို့ အပြန်အလှန် အစစ်အမှန်တွေနဲ့အတူ ထာဝရမှာ ပျော်လျှက်သာ ဖြတ်သန်းကုန်လွန်စေတဲ့ လူဖြစ်ခြင်းနှင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နားလည်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ..
အချစ်ဆိုသည်မှာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်း tag ပို့စ်တစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ ..။
မီးလေးငယ်ငယ်က အမေကြီး(အဖေ့ရဲ့အမေ)တို့ရွာကိုခဏခဏသွားရတာသဘောကျတယ် ပျော်တယ်ပေါ့
ရွာကလဲမီးလေးတို့ဘားအံမြို့ကပါပဲ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ဆယ်အိမ်စုကျေးရွာနားမှာပေါ့။
သံလွင်မြစ်ကမ်းနဘေးမှာကိုင်းစိုက်ကြတယ် ကိုင်းခြံတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ ခရမ်းချဉ်သီး
နေကြာစိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်နေကြာပွင့်တွေကလှမှလှပဲ...... အဖေကလဲစားလို့ရတဲ့အချိန်ကျမှမီးလေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ် ရောက်တာနဲ့ခူးပြီးစားရုံပဲပေါ့
အဲ့လိုမျိုးများတော့မီးလေးကသဘောကျတယ် ပြောင်းဖူးစိုက်ချိန်ဆိုရင် လဲပြောင်းဖူးတွေချိုးပြီးဖုတ်စား
ကြ ပြောရင်းနဲ့သတိတောင်ရလာပြီး ဒါပေမယ့် အဖေကြီး(အဖေ့ရဲ့အဖေ)ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း မရောက်ဖြစ်တော့တာ မီးလေဒီဘန်ကောက်ရောက်တဲ့အချိန်ထိပဲပေါ့ (၁၂)နှစ်လောက်ရှိပြီး။
မီးလေးကအပင်တတ်တာဝါသနာပါတယ် မာလကာပင်ပေါ်လဲတတ်တာပဲ သရက်ပင်ပေါ်လဲတတ်တာပဲ မီးလေးတို့ခြံမှာသရက်ပင်လဲရှိတယ် (အရင်က) အပင်ကမြင့်တော့မတတ်ရဲဘူး...။
ကိုင်းထဲရောက်ရင်သရက်ပင်မှာသရက်သီးတွေကလဲ ထိုင်ပြီးတော့တောင်ခူးစားလို့ရတယ်.နိမ့်နိမ့်လေးပဲ.. အများကြီးပဲ..ဆီးသီးတွေဆိုလဲမပြောနေနဲ့တော့များလိုက်တာလေ
လက်ကလေးတွေကသေးသေးလေးတွေရယ် လိုချင်တာကအများကြီး အဖေဆိုမီးလေးကိုဆူတယ် အများကြီးဘာလုပ်မှာလဲ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့
ပြီးတော့မီးလေးကသရဲကြောက်တတ်တယ် ဘယ်တော့မှကိုင်းသွားပြီးညမအိပ်ဘူး တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရင်..အဖေမပြန်ပဲအိပ်မှမီးလေးလဲအိပ်တယ်...တောဆိုတော့ညဆိုရင် စောစောအိပ်ပြီး
အဲ့ဒါနဲ့...တစ်နေ့ပေါ့ ညဘက်မပြန်ပဲနဲ့ ကိုင်းမှာပဲ အိပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ မီးလေးလဲမောင်နှမ၀မ်းကွဲတွေနဲ့
ချောင်း(သံလွင်မြစ်)ထဲမှာရေသွားချိုးကြတာပေါ့ မီးလေးတို့သွားတဲ့အချိန်က နွေရာသီဆိုတော့ ရေကသိပ်မနက်ဘူး မြစ်လယ်မှာလဲသောင်ထွန်းနေတယ်.... ရေချိုးတော့မယ်ဆိုတော့ထမီရင်လျှားတာပေါ့
အိမ်မှာကဘောင်းဘီနဲ့ပဲချိုးတယ် အဲ့တုန်းကလဲ၎-၅တန်းလောက်ပဲရှိဦးမယ် ချောင်းထဲမှာဆိုတော့ သူများတွေလဲရှိတာပေါ့နော် ရှက်တယ်လေ..ဟိဟိ အမကရင်လျှားပေးတယ် မီးလေးကထမီလဲမ၀တ်ဖူးဘူးဆိုတော့ သူလုပ်သမျှပဲခံရတာပေါ့...သူလုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ မီးလေးလဲရေထဲဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်...ရေထဲမှာထိုင်ချလိုက်တာထမီကဖောင်းပြီးတော့
အပေါ်ကိုတတ်သွားတယ်...သူများတွေဝိုင်းရယ်ကြတော့ရှက်လဲရှက် စိတ်လဲတို ငိုလဲငိုချင် အဲ့ဒါနဲမြန်မြန်လေးထလိုက်တာ..ဟီးးးးးးးးးးထမီကြီးကျွတ်ကျသွားတော့တာပဲ......ဟိဟိ
ပြီးတော့ရေထဲမှာရေညှိအစိမ်းအမျှင်လေးတွေကလဲခြေထောက်နဲ့လာထိတယ် အမကိုမေးတယ်...ဘာတွေလဲပေါ့နော် မမြင်ရဘူးဆိုတော့..သူကရေမြွေတွေလားမသိဘူး သတိထားနော်တဲ့ စတာလေလူကကြောက်ပါတယ်ဆိုမှထပ်ခြောက်တော့ အော်ငိုတော့တာပဲအဖေလှမ်းအော်မှ ရေညှိလို့ပြောပြီးဟိုဘက်ကမ်းကိုခေါ်သွားကြတယ်လေ ကိုယ်ကရေလဲမကူးတတ် ရေပဲချိုးတတ်တယ် ဟိဟိ
ရေထဲဆင်းချင်တာမှလက်ကုန်ပဲ ရွပိုးထိုးတယ်လေ..... အမနဲ့မောင်လေးတွေလဲ ရေနက်ထဲကိုဆွဲခေါ်သွားတာခြေဖျားကမထိတော့ အော်ငိုပြန်ရော ကိုယ်ကငိုရင်သူတို့ဆူခံထိမှာလေ
ကိုယ်ကလဲကြောက်တာကိုး...ခဏခဏပဲ မီးလေးေ၇ထဲဆင်းရင်သူတို့ခြောက်တယ် ...။
အဲ့တုန်းကတော့ကြောက်တော့ငိုဖို့ပဲသိတယ် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ရယ်ကြရတယ် ပြောပြောပြီးရယ်ပေါ့
မီးလေးမှတ်မိသလောက်ကတော့ အဲ့ဒါပဲရှိတယ် တူလေးဂျယ်တတ်ခ်ထားတာ လေးဖြေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်
တူတော်မောင် တားရေးဂျယ်လီက မက်မက်ကို တစ်ခါကဒုက္ခ အခုတော့ ဟာသ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တက်ဂ်ထားတာကို ရေးခိုင်းပါတယ်။ အင်း...ဂျယ်လီကျွေးပြီး လက်ထိုးတာလဲ မရပါလားနော်။ ဟင့်...လူဆိုး...။ရေးပေးဆိုတော့လည်း အရင်ကျောင်းသူ ဘ၀လေးက အဖြစ်လေးကို အမှတ်ရ သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်တရလေးကို ပြန်သတိရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ တူတော်မောင် ဂျယ်လီရေ ကျေးဇူးပါ။
ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ မက်မက်တို့ ငယ်ငယ်တုန်း ကပေါ့လေ။ ချော်လဲမှာ အရမ်းကြောက်တတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက် အိမ်က အဖေ,အစ်ကို,အစ်မတွေက ဘယ်လိုပဲ စက်ဘီးစီး သင်ပေး၊သင်ပေး ဘယ်လိုမှ မတတ်မြောက်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေလတွေ အလီလီ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး တစ်ခုသော နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ မေမြို့မဟုတ်တဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို အလည်အပတ် သွားရောက် ခဲ့ပါတယ်။
သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ သူများတွေ စက်ဘီလေးတွေနဲ့ လေညင်းခံ ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်ကမစီးတတ်တော့ မြင်းလှည်းလေးနဲ့ တူပျော်ပျော်ပေါ့...အဟား။ အဲဒါကို သိတဲ့ မက်မက်အစ်ကိုက စက်ဘီးစီး သင်ချင်လာတဲ့ မက်မက်ကို ပြင်ဦးလွင်မှာပဲ စက်ဘီးစီး ထပ်သင်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသားနာမှာ ကြောက်တတ်တဲ့ မက်မက်တစ်ယောက် စက်ဘီးပေါ်က ခဏခဏ ပြုတ်ကျပေမဲ့ မစီးတတ်ခဲ့ဘူး။ ဟင့်... :( ဒါနဲ့ အစ်ကိုကလည်း စိတ်ပျက်တော့ ထပ်မသင် ပေးတော့ဘူး။ အဟီး...စီးချင်ရင် သူ့နောက်ကပဲ ထိုင်စီးခဲ့ ရတော့တာပေါ့ :)
အဲဒီကမှ တစ်ဆင့် မန္တလေး အိမ်မှာလည်း သွားနေခဲ့ ပါသေးတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ကလည်း ကလေးမဟုတ်လား။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နားက ကလေးက အိမ်ကို အမြဲစက်ဘီးစီးပြီး ရောက်ရောက်လာတယ်။ ကိုယ်ကလည်း စက်ဘီးနဲ့ အပြင်ထွက် လည်ချင်ရင် အဲဒီကလေးကပဲ ကိုယ့်ကို တင်ခေါ်သွား ပေးရတာပေါ့နော့်။ သိတဲ့အတိုင်း စက်ဘီးမြို့တော်မှာ ကလေးက ကိုယ့်ကိုနောက်ခုံ ကနေပြန်တင် စီးသွားတော့ ကိုယ်ကလည်း ကလေးလောက်တောင် ငါအသုံး မကျပါလားလို့ ထင်ပြီး စက်ဘီးစီး ထပ်သင်ချင်တဲ့ စိတ်လေးပြန် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါနဲ့ အဲဒီကလေးကိုပဲ စက်ဘီးစီး သင်ပေးဖို့ ပြောရတော့တာပေါ့။ ကဲ..စပါပြီ..ဆရာမ ပေါက်စလေးရဲ့ အစွမ်း။ ဟဲဟဲ...မမ စက်ဘီးစီး သင်ရင် အရင်ဆုံး ဂျောက်ဂျက်ကနေ သင်ရတယ် မမရ ဆိုပြီး မက်မက်ကို သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာကောင်းတပည့် ပန်းကောင်းပန် ဆိုသလို တစ်နေ့ထဲနဲ့ စီးတတ်သွား ခဲ့တယ်လေ။
ကိုယ့်ကိုပညာ သင်ပေးရင် ဆရာဆိုတာ အသက်ကြီးသည် ငယ်သည် မဟုတ်နော်၊ ကိုယ့်ရဲ့ဆရာ ဖြစ်ထိုက်တယ်။ မမေ့အပ်ပါဘူး။ မက်မက်ကို စက်ဘီးစီး သင်ပေးတာ အသက်အားဖြင့် ၈နှစ်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ကလေးပါ။ သူ့ကို ယနေ့အထိ မေ့မရပါဘူး။ အသက်ငယ်ငယ် ကလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုပြန် သင်ပေးတာပါ။ ယနေ့အထိ သူ့ကိုကျေးဇူး တင်နေပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိ မန္တလေး ရောက်ရင်လည်း သူ့ကို ရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို မတွေ့တော့ပါဘူး။ အခုဆို သူလည်း တော်တော် အရွယ်ရောက် နေရောပေါ့။ :)
ဟီး..ဟီး..အဲဒီတုန်းကဆို အရမ်းပျော်တာ ပဲသိလား။ ငါစက်ဘီးစီး တတ်သွားပြီကွ ဆိုပြီးတော့….ဟားဟား။ ကဲ…နောက်နေ့က စပြီး စပြီပေါ့။ အိမ်ကို လုံးဝ မကပ်တော့ဘူး။ ဟို….မျောက်ပန်းသီး စားရသလိုမျိုးပေါ့၊(အုန်းသီး မကြိုက်လို့ :P) တစ်ချက်မှကို အငြိမ်ကို မနေတော့တာ။ တစ်နေကုန် မိုးလင်းထဲက အပြင်စက်ဘီးစီး ထွက်တော့တာပဲ။
မန္တလေးမြို့ ရဲ့နေဆိုတာ အင်မတန် ပူတာနော်။ ဒါကိုတောင် ဂရုမစိုက် အပြင်ထွက် လမ်းသလားနေတော့ ဟို သီချင်းထဲ ကလိုမျိုးပေါ့ ဆရာနန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင် ရေးတာလေ...ဘာတဲ့...~~~ကြံကြံဖန်ဖန်~~~~ရန်ကုန်သူ~~~~မန္တလာဒွင်းတို့~~ရန်ကုန်~~~သူ ~~မန္တလေး သွားလို့ အသားမည်း ပြန်သတဲ့သူ~~~အဲလိုကို ဖြစ်သွားတာ။ ဟိ...ဟိ.. ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းဖွင့်ရက် ရန်ကုန်ကို ပြန်ရပါပြီ....
ရန်ကုန်ရောက်တော့ အိမ်ကလူကြီးတွေက စက်ဘီးထွက် စီးမယ်ဆိုရင် လုံးဝကိုမကြိုက် ၊ စ်ိတ်လည်းမချ။ ကားတွေ တ၀ှီဝှီနဲ့ဆိုတော့ ထွက်မစီးနဲ့ ဘာနဲ့ ညာနဲ့ပေါ့။ သွားချင်ရင် လမ်းလျှောက်သွားတဲ့၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ဆိုက်ကားစီးသွားတဲ့။ ဟင့်.. :( အစ်ကိုတွေ စီးမှ သူတို့နောက်က လိုက်စီးတဲ့။ ဟင့်..ဟင့်….အဲ့လိုမျိုးကို ချုပ်ချုယ်တာလေ။ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ စီးချင်ရင်တော့ အစ်ကိုတွေနဲ့ လိုက်သွားတယ် ပြီးရင်သူတို့စီက စက်ဘီးကို ယူပြီးလစ် တော့တာပဲ။
သူတို့ကလည်း လက္ဖက်ရည် ဆိုင်ထိုင်။ စော်ငေးပေါ့...ဟီး… :P ။ ကိုယ်ကလည်း အလယ်တန်း ကျောင်းသူ ဒီလိုလုပ်လို့ ဘယ်ရမလဲနော့်၊ ပျင်းသေးတယ် ပျင်းသေးတယ်...ဟေ့...ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်...ဟဲဟဲ...လူကြီးတွေ အရှေ့မှာတော့ မစီးဘူးပေါ့။ သိတယ်မလား၊ ဟဲဟဲ...သယ်ရင်းတွေ ရှိတယ်လေနော်။ သူတို့စက်ဘီးကို စီးတာပေါ့နော့်။
စက်ဘီးစီး တတ်သွားတော့ လမ်းလျှောက်ရမှာကို တော်တော်ဝန် လေးတာလေ။ လမ်းထိပ်နဲ့ လမ်းထဲတောင် လမ်းမလျှောက်သွား ချင်တော့ဘူး။ နေရာတကာ စက်ဘီးလေးနဲ့ပဲ လွင့်ချင်တော့တာ။ အိမ်က လူကြီးတွေက ကိုယ့်ကိုနဲနဲ ခိုင်းလိုက်ရင် စက်ဘီးနဲ့ဆို သွားပေးမယ်။ မဟုတ်ရင် မသွားဘူး ဆိုတော့ နဂိုထဲက စိတ်မချတတ်တဲ့ လူကြီးတွေက လုံးဝကို မခိုင်းတော့ဘူး....ဟီး..ဟီး..အေးရောပဲ.. : P
လူကြီးတွေ ရှေ့မှာတော့ အစ်ကိုတွေနဲ့ အိမ်ကနေ ထွက်သွားတယ်။ ပြီးရင် သူတို့ဆီက Pheasant ဘီးကိုယူပြီး ပေ၁၀၀ လမ်းမပေါ် ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ အစီးကျင့် တော့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ ဇာတ်လမ်းက စပါပြီ စာမေးပွဲနား နီးလို့ ကျူရှင်ကနေ အချိန်ပို ခေါ်သင်တဲ့နေ့ မနက်ပိုင်းကပေါ့ အတန်းပြီးလို့ သယ်ရင်းတွေ နဲ့အိမ်ကို လမ်းလျှောက်ပြီး အပြန်မှာ မက်မက်ရဲ့ အစ်ကိုနဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်စုကို ကောင်စီရုံး ဘေးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ လက္ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တွေ့လိုက်တယ်။ သူတို့ဘေးမှာလဲ စက်ဘီးတစ်စီး ကိုတွေ့တော့ ပျော်သွားတယ်လေ။ အဲဒီမှာ အစ်ကိုဆီကို သွားပြီး သူ့သူငယ်ချင်းဆီက စက်ဘီးကို ယူနင်းတော့တာပေါ့။
ဘီးလေးက သုံးလေးချက်ပဲ နင်းရသေးတယ် ပြသနာက စပြီ။ Pheasantဘီးပဲ စီးတတ်ခါစပဲ ရှိသေးတဲ့ မက်မက်တစ်ယောက် အစ်ကိုသူငယ်ချင်းရဲ့ Mountain Bikes ကိုမစီးတတ်ဘူးဗျ။ စက်ဘီးပေါ် တတ်ပြီး နှစ်ချက်၊ သုံးချက်ပဲ နင်းရသေးတယ် ဟန်ချက်မညီ စက်ဘီးကို မထိန်းနိုင်တော့ Handelက လည်ထွက်သွားပြီး အောက်ကိုပြုတ်ကျ သွားပါတယ်။ ပြုတ်ကျတာကလည်း အကျကောင်းလေ သိလား။
အဲဒီ ကောင်စီရုံး အရှေ့နားမှာ ကြက်သားတို့ ကြက်ခြေထောက်တို့ တုတ်ထိုးလုပ် ရောင်းနေတဲ့ ဗိုက်ကြီးသည် အဒေါ်ကြီးဆိုင်ကို ၀င်တိုက်တာပါ။ အဲဒီမှာ သူ့ဆိုင်ကို လာပြီး အားရပါးရ လာထိုင်စားနေတဲ့ သူကလည်း ဗိုက်ကြီးသည်ပါပဲ။ အဲ...နောက်ပြီး သူတို့ဘေးမှာ ၅နှစ် အရွယ် ၆နှစ်အရွယ် ကလေး နှစ်ယောက်လောက်ရှိမယ်။ ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးရဲ့ ယောက်ျားကတော့ အနောက်ဘက်မှာပါ။
စက်ဘီးပေါ် ပြုတ်ကျတာကလည်း အဆန်းသား။ ရှေ့ဘီးက ဆိုင်ရှင်ဗိုက်ကြီးသည် အပေါ်မှာ ရောက်သွားတယ်။ စက်ဘီးနောက်ဘီးက သူရောင်းနေတဲ့ တုတ်ထိုးဗန်းကို လမ်းမပေါ် တစ်စစီ ဖြန့်ချလိုက်တယ်။ အဲ..မက်မက်ကတော့ စားသုံးသူ ဗိုက်ကြီးသည်ရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်ရက်လေးနဲ့….အဟီး….လက်ကလည်း သူ့ဗိုက်ကို ထောက်မိထားသလို ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်ကပဲ ကံကောင်းတာလား ၊ သူတို့ကပဲ ကံဆိုးတာလားတော့ မသိဘူးလေနော်။ ဟတ်ဟတ် ... :P
လူအားလုံးကလည်း ကြောင်ကုန်တာပေါ့။ မထင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးလေ။ အဲဒီမှာ လက္ဖက်ရည် ဆိုင်ထဲက အစ်ကိုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်ထွက် လာကြတယ်။ ဗိုက်ကြီးသည် အဒေါ်ကိုလည်း မှောက်သွားတဲ့ ကြက်သားတုတ်ထိုး တွေကိုလည်း ပြန်လျှော်ပေးပါ့မယ် ဆိုပြီးတော့ တောင်းပန်တာပေါ့၊ ပိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးနဲ့ သူ့ယျောင်္ားကတော့ ရတယ် ရတယ် မလျှော်နဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီး ကျောင်းသားတွေကို သနားတာပေါ့။ ကိုယ်ကလည်း တမင်လုပ်တာမှ မဟုတ်တာနော်။ အက်စီးဒင့် ဖြစ်သွားတာပါ။
အဲ....အဲဒီမှာဗျာ အပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့ ထိုင်စားနေတဲ့ ဗိုက်ကြီးသည်က လျှော်ရင်လည်း နဲနဲနဲ့ ပေးလို့ မရဘူး။ အထဲက ကလေး တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင် နင်တို့တော့ မလွယ်ဘူး ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ရန်လုပ်တာကို ခံရတာပေါ့။ ကိုယ်တွေကလည်း သူမပြောလဲ သိတတ်ပါတယ်။လျှော်ပေးမှာ ပါပဲနော်။ ကိုယ့်ကို အပြစ်မယူဘဲ အားပြန်နာနေတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို ကိုယ်ကလည်း သနားတော့ အဲဒီအချိန် ခေတ်တုန်းက ငွေ၅၀၀၀ ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အစ်ကိုက ပိုက်ဆံ ပေးအပြီးမှာ မရဲတရဲနဲ့ မက်မက်တစ်ယောက်ထဲ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ ရတာပေါ့။
စိတ်ထဲမှာတော့ အိမ်ကသိ သွားမှာကို လုံးဝကို လန့်နေတာ ။အစ်ကိုက အိမ်ကိုပြန်တိုင်ရင် မက်မက်ပဲ အရိုက်ခံ ရမှာလေ။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကလည်း မက်မက်စက်ဘီးမှောက်တာ မြင်တဲ့သူ ကြားတဲ့သူ ရှိတယ်လေ။ ကိုယ်ကအိမ်ကို မရောက်သေးဘူး ကိုယ့်သတင်းက ပေါက်ကြားပြီး အိမ်ကိုရောက်နေမှာ စိုးရိမ်ရတာပေါ့။ သူတို့သာ သိရင် အဆူခံ အရိုက်ခံ ရမှာလေ။ ဇောချွေးတွေကလည်း ပြန်နေပြီ။ တိုက်မိတာက သာမာန်လူတွေကို မဟုတ်ဘူး။ အဟီး..... ဗိုက်ကြီးသည် နှစ်ယောက်ကိုမှ တိုက်မိတာ။
အဲ.....ဒါကြောင့် အရိုက်ခံ အဆူခံ ရတော့မယ်ဆိုရင် ငယ်ငယ်ဘ၀ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား ကလေးလေးတွေရဲ့ အကျင့်အတိုင်း မြက်ပင်ကိုနှုတ် လက်ထဲမှာ ဆောင်ထားရင် အရိုက်ခံရတာ လွတ်တယ်လို့ ဘယ်စာဆိုထဲက မှန်းမသိတဲ့ အကျင့်အတိုင်း လုပ်သွားပြီး အိမ်ကိုပြန်ပါတယ်။ ဟီး.....ကံကောင်းချင်တော့ အိမ်ကို မန္တလေးက ဘုန်းကြီးကြွ နေတာနဲ့ တိုးတော့တာပေါ့။လူကြီးတွေလည်း ဘုန်းကြီးကို ဧည့်ခံနေရတော့ မက်မက်ကို လုံးဝမေ့ သွားသလို ဖြစ်နေတာ။နောက်တော့ ပြသနာက အေးသွားတော့ သူတို့လည်း ကိုယ့်ကို ဘယ်ဆူလို့ ကောင်းတော့မှာလဲနော်...အဟီး.... :)
ကဲ….ဗျာ….အဖြစ်လေးကတော့ အဲဒါပါပဲ။ ကလေးအတွေးနဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မြက်ပင်ကိုဆောင်လို့ပဲ အရိုက်ခံ အဆူခံ ရခြင်းက လွတ်တာလား? ဒါမှမဟုတ် အိမ်ကို ဘုန်းကြီးဧည့်သည် ကြွနေတာကြောင့် လွတ်တာလား? ဒါတွေကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမိတော့ တစ်ချိန်က ဇောချွေးပြန်ပြီး ကြောက်ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခက အခုတော့ ရယ်စရာ ဟာသအမှတ်တရ အဖြစ်လေးပေါ့လေ။
ကဲ... အခုလို အစအဆုံး ဖြစ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အဖြစ်မှန်လေး တွေကိုလည်း ဟာသအဖြစ် ပြန်လည် တင်ဆက်ခွင့် ပေးလိုက်တဲ့ တူတော်မောင် ဂျယ်လီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကဲ…. တားတားရေး ဂျယ်လီရေ ဒီတက်ဂ်ပို့စ် ကိုဂျယ်လီလေး စားရင်း ကျေနပ်တော့နော့်။
တီတီဒွင်းရေ… စိတ်ညစ်တယ်.. စိတ်ညစ်တယ်… ဟင့်…
ဟော… ဒီတစ်ခါလည်း ဘာဖြစ်လာရ ပြန်တာတုန်း… သမီးလေးမက်မက်ရဲ့။
ဟို ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ တွေလုပ်ပြီး အလေအလွင့် ဖြစ်နေတဲ့ အော်…မှားလို့ လေလွင့်နေတဲ့ အန်ကယ်လ်ရဲကို သိလားတီတီဒွင်း၊ ဟို…သူ့ကိုယ်သူ အလေအလွင့် ဆိုလား လေလွင့်သူ ဆိုလား ဘာလား မသိဘူးလေ၊ သိလားတီဒွင်း။
အင်း.. သိတယ်လေ။ဟိုကောင်လေး မဟုတ်လား။ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ကောင်လေးလေ။
အင်းလေ၊ တီဒွင်းရဲ့။ သူ့အိမ်ကိုလေ ဟိုနေ့က မက်မက်က မျက်စိလည်ပြီး ရောက်သွားတာ တီဒွင်းရယ်။ အိမ်လည်လာတဲ့ သူကိုလေ ကော်ဖီလေးနဲ့များ ဧည့်ခံမလား မှတ်တယ်။ သူကလေ ကော်ဖီမတိုက် တဲ့အပြင် မက်မက်ကို အချစ်အကြောင်း ရေးပေးရ မယ်ဆိုပြီး တက်ဂ်လိုက်တယ် တီတီဒွင်းရဲ့။ ဂယ်ပါဖဲ.. တီဒွင်းရယ်..တမီးဂ ချိတ်ညစ်ဒါပေါ့ယို့။ အထုမှ ထရေးဂ နယ်နယ်ဖဲ ချိတေးဒါဂို လူဂျီးဒွေက အရှစ်အကျောင်း ရာရာမေး နေဒေါ့… ထရေးဒေါင် ရင်ဒွေထုန် တွားတာပေါ့ယို့…. အဟီး.. :P
တယ်..ဒီကောင်မလေး….ဒါမျိုးကျ တတ်တယ်။ ဟွန်း….ငါလုပ်လိုက်ရ…. နာတော့မယ်…
အဟဲ… တီဒွင်းကလည်း ။ဒါဆို တီဒွင်းရဲ့ အချစ်ခံ ယူပုံလေး ကိုပဲပြောပြ…. နော်… အဲဒါလေးကိုပဲ မက်မက် သူ့ကိုပြန်ပြော လိုက်မယ်လေ…နော်.. တီတီနော်… ပြောပြနော်…နော်..လို့…နော်လို့ဆိုနေ…. တီဒွင်းဂရဲ… :P
အင်း..ဒါဆို တီတီဒွင်း ပြောပြမယ်.. နားထောင်…..
ဟေး…ဒါမှ တို့တီတီဒွင်းကွ… အာဝါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး အဟီး.. တီတီ့ကို ဒါကြောင့် မက်မက်က ချစ်တာ… သိလား….
ဒီလိုသမီးရဲ့။ တီဒွင်း ဖတ်ရတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက သိသလောက် ပေါ့လေနော်။ တကယ်တော့ အချစ်သဘောမှာ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ကြရ တာတွေက သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်း အခြေအနေ မျိူးမှာပဲ ဖြစ်တည်ရတာ များကြတယ် သမီးလေးရဲ့။ အဲ့ဒီ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆိုတဲ့ အခြေအနေ မျိုးတွေမှာ ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဦးဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်းရဲ့ အစပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တာလည်း ရှိသလို အဆုံးပိုင်း ရောက်မှ ဖြစ်ပေါ်တတ် တာလည်း ရှိတယ် သမီးမက်မက်ရဲ့။
အေး….အဲဒီလို ဖြစ်ပေါ်ပြီ ဆိုရင် သမီးရေ သုံးဦးသုံးဖလှယ် အခက်ကြုံရ ၊ ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့။ အဲလို ဒုက္ခရောက် အခက်ကြုံရပြီ ဆိုရင် ကာယကံရှင် တစ်ဦးဦးက ၀မ်းနည်းကြေကွဲ မှုကိုတော့ မလွဲမသွေ ခံစားရမှာပဲ သမီးလေး။ အဲ.. တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ သုံးယောက်လုံး ထိခိုက်ခံစား ရတတ်တာပေါ့လေ။
ဟုတ်ကဲ့ ..တီတီဒွင်း။ ဒါဆို အချစ်မှာ အနှောင့်အယှက် ကင်းအောင်နေတာက အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ ဟုတ်လား တီဒွင်း
ဒါပေါ့ သမီးရ။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် အချစ်မျိုးမှာတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပဲ စွဲလမ်းမှုနဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ချစ်ခင်မြတ်နိုး မှုအပေါ်မှာ အခြေခံတာပေါ့ သမီးရ။ဒါပေမယ့် ရိုမန့်တစ် ဆန်ဆန် ရေးသားထားတဲ့ အချစ်စာအုပ်တွေ စာပေတွေမှာတော့ အချစ်တွေမှာတော့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းတွေက တော်တော်စိုးမိုး နေတတ်တာလေ။ အဲဒီမှာ အချစ်ဆရာကြီးတွေ ဖြစ်နေကြတယ် ဆိုတာက သုံးပွင့်ဆိုင် ဖြစ်လာမှ သူတို့ရဲ့ အချစ်အင်အား အတွေ့အကြုံတွေ တိုးပွားလာတတ်တာ။ ဟယ်…. သူက ငါ့ကိုမှ အမှန်တကယ် ချစ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ စိတ်မတင်မကျ ဖြစ်နေရတတ်တယ်။
အာသာဘုရင် နဲ့ သူ့မိဖုရား ဂွင်နီဖာ ရယ် ၊ ဆာလန်းစလော့ လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံး သူငယ်ချင်း စစ်သူရဲကောင်းတို့ ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာလည်း သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းဆိုတာ သမီးအသိပဲလေ
တစ်ခါတစ်ခါမှာ လူတွေဟာ သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းဖြစ်လာရင် သူတို့တွေ အတွက်က ချစ်ရမ္မက် ပိုမိုပြင်းထန် လာသလို ခံစားရတတ်တယ်။ အဲ....တချို့ကျတော့ အဲလိုမျိုး သုံးပွင့်ဆိုင် လို့ခေါ်တဲ့ ချစ်တြိဂံ ဇာတ်လမ်းကို တမင်တကာ ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုရင် သူတို့ဟာ အဲလိုထားခြင်း အားဖြင့် အန္တရယ် ကြီးမားလှတဲ့ စိတ်တတ်ကြွ လှုပ်ရှားမှုကို လက်ခံထားရာ ရောက်တာပေါ့လေ။ စိတ်တွင်းခံစားမှု၊ လှုံခြုံမှု မရှိတာတွေ ကို အသိအမှတ် မပြုချင်တဲ့ သဘောပေါ့လေ။ အဲလို သုံးပွင့်ဆိုင် အခြေအနေ မျိုးကိုလက်ခံ ထားမိတဲ့ ချစ်သူများ အနေဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ ကို ပုံ၍ချစ်ဖို့ မဆုံးဖြတ် တတ်အောင်လည်း ဖြစ်စေတတ်တယ် သမီးရဲ့။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကို ပုံပြီးချစ်လိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ အဖိုးတန်လှတဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ လွတ်လပ်မှု ဆုံးရှုံးနစ်နာ စေနိုင်တယ်လို့ ယူဆကြတယ်တဲ့ သမီးလေးရဲ့။
အမှန်အားဖြင့် သုံးပွင့်ဆိုင် မတည်မြဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဟာ အခိုက်အတန့် လေးတစ်ခု ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက် အဆုံးအဖြတ် မပြုနိုင်တဲ့ လိုချင်စိတ် ငမ်းငမ်းတတ် အခြေအနေ တစ်ခုကို ဖန်တီးပေး ပါလိမ့်မယ် သမီးလေးရယ်
ကဲ..ကဲ…တီဒွင်းလည်း ကိုယ်ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာလေးတွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး သိသလောက်လေး ပြောပြတာပါကွယ်။ တီဒွင်းလည်း အချစ်အကြောင်းကို သိပ်မသိဘူး သမီးလေး မက်မက်လေးရယ်။ တော်နေ တီဒွင်းကို အချစ်ဆရာမကြီး အဖြစ် အချစ်အကြောင်းတွေ လာလာမေးနေရင် ဒွတ်ခ။ ဟားဟား…
ကဲ… ချစ်သူတိုင်း ညားကြပြီး ညားသူတိုင်းလည်း ချစ်နိုင်ကြ ပါစေလို့ တီတီဒွင်းက ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ပြီးတော့ ချစ်သူတိုင်း သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းတွေမှ ကင်းလွတ်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ပန်းခင်းလမ်းမှာ ထာဝရ လက်တွဲလို့ လျှောက်လှမ်းနိုင် ပါစေလို့ ဆန္ဒပြု လိုက်ပါတယ် သမီးလေးမက်မက်။
ကဲ…. ဒီထက် ပိုပြီး တီတီဒွင်း ရဲ့အချစ် အကြောင်းကို သိချင်ရင် မျက်ဝန်းမှတစ်ဆင့် နဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာ ကိုပဲပေးဖတ် ကြည့်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ သမီးရ။ ဒါလေးများ လွယ်လွယ်လေး..နော်။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ခိုင်းလိုက်နော် :)
ဟာ… ဟုတ်သားပဲ… တီဒွင်း ကအချစ် အကြောင်းတွေ ထုတ်ဖော်ထားတာ ရှိတာပဲ။ အဟဲ.. အခုမှ သတိရတယ်။ ကဲ တီဒွင်းရေ……အခု အချစ်အကြောင်း လေးကိုပဲ အဲဒီအလေ လိုက်နေတဲ့ ဦးရဲ အဲ….ဟုတ်ပါဘူး … အလေအလွင့်ဦးရဲ အော်.. ကြည့် မှားကုန်ပါပြီ…. အဟီး… ပြောချင်လွန်း အားကြီးသွားတယ်.. ဟတ်ဟတ်… ဝေဟင်မှာ လေဟင်စီး လေလွင့်နေတဲ့ ဦးရဲ ကိုသွားပြီး ပြေးပြောလိုက် ဦးမယ်နော်.. တီတီဒွင်း…. အာဝါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
မြေနီလမ်းကလေးအတိုင်း အပြေးတစ်ပိုင်း လျှောက်လာခဲ့တဲ့ ကျနော့်ခြေလှမ်းတွေက တုန်ချည့်နေပါပြီ..။ လွင့်ပျံ့တက်လာတဲ့ ပုပ်အက်အက် အနံ့တွေက ကျနော့်ကို တကယ်ပဲ အော်ဂလီဆန်သွားစေပါတယ်..။ တံခါးကို ဂျိမ်း ကနဲ ဆောင့်ပိတ်ရင်း အသက်ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် အောင့်ထားလိုက်တယ်..။ အခန်းလေးက ကျနော့် တစ်ကိုယ်စာ ဆန့်ရုံလေးပါ..။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် ထိုင်ချလိုက်တယ်..။
ကျနော်ကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ သူ့အကြည့်ခပ်စိမ်းစိမ်းတွေကို ရုတ်တရက် ရင်ဆိုင်လိုက်ရတော့ ကျနော် တော်တော်လေး လန့်သွားမိတယ်..။ ကျနော် သိထားတာ ဒီအခန်းထဲမှာ ကျနော် တစ်ယောက်တည်း.. အခုတော့..။ ကျနော့် လာရင်း ကိစ္စကို မေ့သွားလောက်အောင် ရင်တွေလည်း ခုန်လာပါတယ်.. သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျနော့် စိတ်တွေကို တုန်ရီ မောဟိုက်လာစေတယ်..။ ဒီနေရာမှာ သူရှိနေမယ်လို့ ကျနော် လုံးဝ ထင်မထားခဲ့တာပါ..။ ကျနော်ကတော့ တစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အရာရာကို မေ့လျော့ လွတ်လပ်နေလိုက်တာ..။ မထင်မှတ်ပဲ သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့.. ကြောက်လည်းကြောက်.. ဒေါသလည်းထွက်.. ရှက်လည်းရှက်.. ကျနော် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ..!
တဖြေးဖြေးတိုးလာတဲ့ သူ့ခြေလှမ်းတွေ.. သူ့လက်က မွေးညင်းနုလေးတွေ.. သူ့နှုတ်ခမ်းက ခပ်တိုးတိုး အသံတွေ.. အို.. ကျနော့်လေ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ တစ်ကိုယ်လုံးကို တောင့်တင်းသွားခဲ့တာပါ.. အသက်လည်း မရှူရဲ လောက်အောင် ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ငုတ်တုတ် မင်တက်မိနေတယ်.. ခြေဖျားလက်ဖျားတွေလည်း ရေခဲတုံးတွေလို.. ကျနော့် ပါးတွေ နားတွေလည်း မီးမြိုက်ထားသလို ပူလောင် နီရဲလို့..။ အေးသလား.. နွေးသလား.. မသိတော့တဲ့ ချွေးစေးတွေလည်း စိမ့်ထွက်လာပါတယ်.. ကျနော် ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ..! ရင်ဆိုင်လိုက်ဖို့ဆိုတာလည်း မတွေးရဲပါ..။
အခန်းတံခါးကိုဖွင့် ပြေးထွက်သွားရင် ကောင်းမလား..! ဒီလိုတော့လည်း ကျနော် မထွက်ရဲ.. ကျနော့်ရဲ့ အရှက်.. အရှက်တရားတွေ.. သိက္ခာတွေ..။ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့လည်း မ၀ံ့ရဲ.. ခုန်ချလိုက်လိုက်ဖို့ ဆိုတာမတွေးရဲစရာ.. ကျနော် မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလား..! သူ့မျက်လုံးကို ရဲရဲ ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ရော..! ဖြစ်ပါ့မလား..! ကျနော်ထိတ်လန့်နေတယ်.. သူဘာလို့ ဒီအခန်းထဲ ရောက်နေတာလဲ..! ကျနော်.. ကျနော်လေ..!
ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကလည်း အကြီးအကျယ် ဖိအားပေးနေပါတယ်.. ကြက်သီးတွေလည်း ကျောထဲက စိမ့်ပြီး ထလာပါတယ်.. ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတယ်.. အာခေါင်တွေလည်း ခြောက်ကပ်လာတယ်.. အသက်ရှူရတာ မ၀တော့ သလိုလို.. ခေါင်းတွေမူးလာသလိုလို..။ ကြောက်စိတ်နဲ့ ဝေဒနာကြားမှာ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခက သေလုမြောပါး ပါပဲ..။
ကျနော် အသက်အောင့်ထားလိုက်တယ်.. မျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး အံကို ခပ်တင်းတင်း ကြိတ်လိုက်တယ်.. လက်သီးကိုလည်း ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားလိုက်တယ်.. ရှိသမျှအားအင်တွေကို စုရင်း စိတ်ရှိလက်ရှိ... ညှစ်ချလိုက်တယ်...
(((((((((((... ဗွမ်း ...)))))))))))
ကျနော့် နားထဲက လေတွေထွက်သွားတာ “ဟူးးး..” ကနဲ ပါပဲ..။ ကျနော့် မျက်နှာကြီးလည်း ပူရှိန်းနီရဲသွားတယ်.. ။ ကျနော့်တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ပူထူပြီး ပျော့ခွေသွားပါတယ်.. ကျနော် သူ့ကို မ၀ံ့မရဲ မော့ကြည့်လိုက်တော့.. သူ... ကျနော်နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ဒေါင့်တစ်နေရာကို ရောက်နေပါပြီ.. ကျနော့်ကို နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး ကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေက အံ့သြမှုတွေ.. ထိတ်လန့်မှုတွေ.. ရွံရှာမှုတွေနဲ့..။
မျက်နှာကချွေးတွေကို ခိုးသုတ်ဖို့ လက်လှမ်းလိုက်ချိန်မှာပဲ သူကတော့ ကျနော့်ကို ကျောခိုင်းပြီး တလှုပ်လှုပ်နဲ့ အဝေးဆုံးကို ပြေးထွက်သွားပါပြီ..။ သူ.. ကျနော့်ကို လန့်များသွားတာလား..! ရှက်များသွားတာလား..! ဒါမှမဟုတ်..! ကျနော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ..!
ကျနော် သက်ပြင်းချလိုက်ရင်ကောင်းမလား..! လေထဲမှာ လွင့်မြောနေသလို ခံစားနေရတယ်.. ပေါ့ပါးသွားပါပြီ.. ကျနော် ကျေနပ်သွားပါပြီ.. ရုတ်တရက် တံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီး လောကကြီးထဲ ပြေးဝင်လိုက်တာ တိုက်ခတ်နေတဲ့ လေအေးအေးတွေက ကျနော့်ကို ပွေ့ဖက် တစ်ကိုယ်လုံး အပူတွေ ထွက်တဲ့ အထိပါပဲ..။
ကျနော် ငိုရမလား..! ရယ်ရမလား..!
ကျောင်းအိမ်သာကြီးကတော့ ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး တဟားဟားနဲ့..
ဖွင့်ဟချက်။ ။ ဟိုး.. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကလေးအရွယ်.. ရွာက ကျောင်းအိမ်သာထဲမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြေကြွက်ကြီးနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ.. အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ဒုက္ခပေါ့.. အခုပြန်တွေးကြည့်တော့လည်း ရယ်စရာ ညစ်တီးညစ်ပတ် ဟာသလေးပါ.. ဟီးး
ညီလေးဂျဲဂျယ် ရေ.. ညီ Tag ထားတဲ့ တက်(ဂ်) ကြွေးလေးကို ဗွမ်း! ကနဲ စပ်လိုက်ပါတယ်နော်.. ဟီးးး :D